आपतकालीन वित्तीय राहत
विद्यार्थी, आप्रवासी, र कामदारहरूको लागि बाहिर
कसरी लागू गर्ने
MAF COVID-19 रैपिड प्रतिक्रिया कोष शुरू गर्‍यो
कोरोनाभाइरस (COVID-१)) महामारीले हामीलाई के जहिले थाहा छ भन्ने कुराको पर्दाफाश गर्दैछ: हाम्रो देशको गहिरो असमानता र सुरक्षा बिच्छेदका कार्यक्रमहरूले करोडौं मानिसहरूलाई सहयोग वा राहत बिना छोड्छ। आज, हामी ती दु: खक वास्तविकतालाई हेरिरहेका छौं जुनसँग भुक्तानी गरिएको बिरामी छुट्टी, बेरोजगारी लाभ, वा सामाजिक सुरक्षा नेट सुरक्षाको लागि यस आँधीबेहरीलाई मद्दत गर्न विलासिता छैन।
एमएएफको द्रुत प्रतिक्रिया कोषले मानिसहरूलाई यस आँधीबेहरीको मौसममा आवश्यक पर्ने श्रोतहरू र आपतकालीन राहतसँग जोड्नेछ।
COVID-19 संसाधन खोजकर्ता
एमएएफको इन-हाउस एप्लिकेसनले व्यक्तिहरूलाई सिधा संसाधनहरूमा जोड्दछ जुन तिनीहरू योग्य हुन सक्छन्, समय र प्रयास जटिल कार्यक्रमहरू र सेवाहरू मार्फत नेभिगेट गर्न बचत गर्न।
प्रत्यक्ष नगद अनुदान
एमएएफले $500 नगद अनुदान वितरण गर्दछ जो यस संकटको समयमा सरकारी सहायता वा राहत प्राप्त गर्न सक्दैन वा गर्न सक्दैनन्। व्यक्तिलाई नगदी चाहिन्छ - र यसलाई उत्तम प्रयोग गर्ने निर्णय गर्न स्वतन्त्रता। कुनै भुक्तान आवश्यक छैन।
आपतकालीन पुल .ण
शून्य ब्याज आपतकालीन loansणले साना व्यवसाय मालिकहरूलाई आर्थिक संकटमा पार गर्न मद्दत गर्दछ। पहिलो months महिनाको लागि कुनै पनि ayण चुक्ताको साथ, यी loansणहरूले व्यवसायीहरूलाई व्यापार पुन: प्राप्ति नभएसम्म मद्दत गर्दछ।
आर्थिक मद्दत खोज्दै हुनुहुन्छ? यहाँ के उपलब्ध छ भनेर खोज्नुहोस्:
एक आप्रवासी परिवारका लागि अनुदान, जो फेडरल कोरोनाभाइरस प्रोत्साहन जाँच प्राप्त गर्न योग्य छैन र महामारीको कारण आय गुमाएका छन्।
सीए कलेज विद्यार्थी कोष
क्यालिफोर्नियाको सार्वजनिक कलेजमा स्नातक विद्यार्थीहरूको लागि अनुदान जसले कम्तीमा एक वर्षको पाठ्यक्रम पूरा गरेको छ र वित्तीय आवश्यकता प्रदर्शन गर्दछ।
१ County र of० वर्ष उमेरका बीच जवान रचनात्मकका लागि अनुदानहरू जो ला काउन्टीमा बस्छन् र महामारीको कारणले आयको महत्वपूर्ण हिस्सा गुमाएका छन्।
हामीसँग सामेल हुनुहोस् सुनिश्चित गर्न को लागी कोही पनि बाँकी नहोस्
समाजसेवीहरू र समुदायका सदस्यहरूको उदार सहयोगको साथ, हामी सिधै आफूलाई चाहिएको व्यक्तिको हातमा पैसा उठाउँदै छौं: कम आम्दानी र आप्रवासी परिवारहरू जो अनौपचारिक, आंशिक समय, वा गिग काममा निर्भर छन्; साना व्यवसाय मालिकहरू, कलाकारहरू, र उद्यमीहरू आर्थिक पतनले नष्ट भएका; र कलेज विद्यार्थीहरू जसले सरकारी चेक वा बेरोजगारी सुविधाहरू प्राप्त गर्दैनन्।
हाम्रो फंड्राइज गर्ने टीमसँग सम्पर्क राख्नुहोस्
प्रत्येक डलर एमएएफको द्रुत प्रतिक्रिया कोषमा योगदान गरिएको प्रत्यक्ष अनुदान र .ण लिनेहरूलाई वितरण गरिन्छ।
यहाँ छ पैसा कहाँ गइरहेको छ
र्‍यापिड प्रतिक्रिया कोषबाट अनुदानको लागि को योग्य छ?
तीव्र प्रतिक्रिया कोषले विद्यार्थी, आप्रवासी र सरकारको प्रतिक्रियाले पछाडि छोडेका मजदुरहरूलाई आपतकालीन आर्थिक राहत प्रदान गर्नेछ। अनुदानको लागि योग्यता प्रदर्शन गर्न, उदाहरणका लागि, विद्यार्थीहरूले उनीहरूको ट्रान्सक्रिप्ट र वित्तीय आवश्यकताको एक प्रतिलिपि प्रदान गर्नु पर्छ। कामदारहरू, कलाकारहरू, र साना व्यवसाय मालिकहरू जसले काम वा घण्टा गुमाए उनीहरूले उनीहरूको १०99 ss वा वैकल्पिक कामको व्यवस्थाको अन्य प्रमाण देखाउनु पर्छ। विशिष्ट आवश्यकताहरू कार्यक्रममा निर्भर गर्दै फरक हुन्छन्, तर प्रत्येक अवस्थामा MAF को COVID-19 संसाधन खोजकर्ताले आवेदकहरूलाई उनीहरूलाई के लाभहरू उपलब्ध छन् निर्धारण गर्न मद्दत गर्दछ।
आवेदकहरूले कति प्राप्त गर्छन्?
एमएएफको द्रुत प्रतिक्रिया कोषले विद्यार्थी, कम आय, र आप्रवासी घरानालाई सरकार समर्थनका लागि अयोग्यको लागि १TP2T500 प्रत्यक्ष अनुदान प्रदान गर्दछ। सबै अनुदानहरू अप्रबन्धित छन् ताकि व्यक्तिलाई उनीहरूको जीवनमा सब भन्दा प्रेस गर्ने सबैलाई आवरण गर्न मद्दत गर्न। कोषले साना व्यवसाय मालिकहरूको लागि १TP2T2,500 को शून्य ब्याज पुल loansण पनि प्रदान गर्दछ। सबै आवेदकहरू एमएएफको कोरोनाभाइरस रिसोर्स खोजकर्ता throughअन आवेदन मार्फत आवेदन दिन्छन् जसले संघीय, राज्य, र स्थानीय कार्यक्रमहरू सहित प्रत्येक आवेदकको लागि उपलब्ध संसाधनहरूलाई सँगै तान्छ। एप्लिकेसनले eligible- or योग्य कार्यक्रमहरू वा प्रत्येक आवेदकको लागि समर्थन, जहाँ कही लागू –MAF नगद अनुदान र पुल loansण, साथै एमएएफको द्रुत प्रतिक्रिया कोष जडान गर्दछ।
रकम कत्तिको चाँडो वितरित हुनेछ?
हामी बुझ्दछौं कि समय महत्वपूर्ण छ: एक पटक आवेदन प्राप्त भएपछि र अनुमोदित भएपछि ढिलाइ र कठिनाइहरू कम गर्न कोषहरू अनुदान र bण लिने खाताहरूमा सीधा जम्मा हुनेछन्। वितरण स्वीकृतको अनुमानित समय application२ घण्टा आवेदन अनुमोदनबाट छ।
मेरो पैसा कहाँ जान्छ?
एमएएफको द्रुत प्रतिक्रिया कोषमा योगदान पुर्‍याउने एक सय प्रतिशतले सीधा मानिसहरूमा जान्छ जसलाई यसको आवश्यक पर्दछ। हाम्रो नम्बर एक प्राथमिकता मानिसहरूलाई सताईएको छ जो संकटबाट प्रभावित छन् तर फेर्नुको अरु कुनै ठाउँ छैन। हामी हाम्रो संगठनको लागतहरू कभर गर्न छुट्टै कोष स conduct्कलन गर्नेछौं।
Coronavirus रैपिड प्रतिक्रिया कोष समर्थक
यस्ता समयमा, यो जान्नु महत्त्वपूर्ण छ कि हामी यस काममा एक्लै छैनौं। हाम्रो समुदायका सदस्यहरूका लागि महत्वपूर्ण स्रोतहरू जुटाउन हाम्रो परोपकारी साझेदारहरूको नेतृत्व र समर्थन पाएकोमा एमएएफ कृतज्ञ छ।
सर्जे ब्रिन परिवार फाउन्डेशन
कोनी र बब लुरी
जिम र बेकी मोर्गन
ग्लोरिया प्रिन्सिपे र जोन ओ'फरेल
Tammy & बिल क्राउन
जर्ज र जुडी मार्कस परिवार फाउन्डेशन
जेनेट र क्लिन्टन रिले परिवार फाउन्डेशन
मार्क र मेरी स्टीभन्स
क्रिस्टन क्याम्पबेल रीड
सदैव कडा कोष
एन्ड्रयू र मारिना मार्टिन परिवार कोष
Neukermans परिवार कोष
जोन फिशर र राफिला Lipinsky DeGette
मिरियम मस्करोलास र अनुदान अब्रामसन
डेभिड र सुसन टनेल
जोन ब्ल्याट्ज र मेघन केली
वायोलेट वर्ल्ड फाउन्डेशन
ताजा कट रचनात्मक
सुसान स्टेनहाउज़र र डेनियल ग्रीनबर्ग